Gọọmenti Anambra Etòó Ndị Uwe Ojii Maka Ijide Na Ịkpụpụ Ịkanda Ụlọ Ikpe
Previous Article Otu Nzúzo: Ndị Uwe Ojii Anwụchikọọla Mmadụ 151 n'Anambra
Next Article Ụlọ Omebe Iwu Anambra Abàgide Ịmàchì Oke Mmefù Ego N'akwamozu
Nke a dị n'ozi a kụpụrụ nso-nso a, bụ kọmishọna steeti ahụ na-ahụ maka mgbasa ozi na ịkọwara ọhanaeze ihe ha kwèsìrì ịma, bụ maazị C-Don Adinụba binyere aka na ya. Ya bụ ozi kọwara na maazị Nwokolo bụ onye e gbùrù site n'aka ndị ekperima, bụ ndị na-ebugharị onwe ha dịka ndị ọrụ gọọmenti na-anakọsị ego, oge ha chọrọ ịkapụ otu onye ọgbaa tùm-tùm aka ya dị ọcha ego, bụ nke ya onwe ya (bụ maazị Nwokolo) kwèchììrì mà foro ntùtù taa, sị na ha agaghị eme nke ahụ.
Dịka ya bụ ozi siri kọwaa, aka na-achị steeti ahụ, bụ gọvanọ Willie Obianọ edegarala onyeisi ndị uwe ojii steeti ahụ, bụ maazị Mustapha Dandaura akwụkwọ ozi èkèlé bànyere ótú ya na ndị òtù ọrụ ya sìrì wee nwụchikọọ ma kpụpụ ya bụ nwa amadi ụlọ ikpe, bụ onye ha nwụchikọrọ n'otu ebe zoro ezo n'Ọnịtsha, bụ ebe ọ nọ wee na-eche ka ndị òtù ya wètara ya ego ha nàkọtara ndị mmadụ site n'ụzọ iwu na-akwàdòghị. O kwuru na nke ahụ gosiri na ndị uwe ojii steeti ahụ na-arụsi ọrụ ike ma na-emeputekwa ihe a hụrụ anya na ngalaba nchekwa steeti ahụ, n'ilekwasa anya n'ọtụtụ mbọ ha gbàgoro nso-nso a.
O gosiputazịkwara ezi ntụkwàsị obi o nwere na nke ahụ ga-aga n'ihu ịkwalite ezi ọnọdụ nchekwa na mmepe na steeti ahụ, dịka ọ ga-enye aka ibèlatà ohi, mpụ na arụrụala ndị ọzọ na-agbachigha aka elekere azụ n'ụzọ dị iche iche na ya bụ steeti.
Ya bụ ozi mezịrị ka a mara afọ ojuju gọvanọ Obianọ banyere otu ndị ọrụ nchekwa si arụ ọrụ ha na ya bụ steeti, bụ nke o kwùrù na ọ dabàrà adaba n'ịgbaso ezi ebumnobi ya iwètara ụmụafọ steeti ahụ ezi nchekwa ndụ na akụnụba, bụ nke a pụghị ịgbakụta azụ oge ọbụla a na-ekwu okwu mmepe n'ụdị ọbụla. O mekwazịrị ka a mara na ọchịchị ya ga-aga n'ihu n'inye ndị ọrụ nchekwa steeti ahụ nkwàdo zuru òkè.
Ikanda, gbárá ahọ iri abụọ na asaa, bụ onye Azịa dị n'okpuru ọchịchị Ihiala na steeti Anambra. Ọ bụ onye a na-enyo enyo na ọ bụ ya na ndị òtù ya gbùrù otu nwoke a maara dịka Ndubuisi Nwokolo n'abalị iri abụọ na iteghete nke ọnwa Juunu ahọ 2018, nke mezịrị ka gọọmenti steeti Anambra kwe nkwà na a ga-enye onye ọbụla jidere ma ọ bụ gbaa ama otu a ga-esi jide ya otu nde Naịra.